ခင်ကြရအောင်ဗျာ — MYSTERY ZILLION
:101::101:ကျွန်တော်က အခုမှ Software ပိုင်းကို လေ့လာမှာပါ.. ကျွန်တော် မသိသေးတာ မတတ်သေးတာတွေ ရှိနေတော့ ၀ိုင်း၀န်းပြုပြင်ရင်း စောင့်ရှောက်ကြပါလို့.. နော်:103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103:
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ကြရအောင်။ software သမားချင်းအတူတူမို့ ပိုပြီးတော့ အားတက်မိပါတယ်။ အတူတူလေ့လာပြီး အတူတူေ၀မျှကြတာပေါ့။
လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ :6: :6: :6:
Mz က ကြိုဆိုပါတယ်ရှင် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ရင်ခွင့်လွင့် wrote: »
You are welcome.. Participate in our Discussion !
ur welcome to mysteryzillion...........
ကျွန်တော်က ပထမနှစ် ဆေးကျောင်းသားပါ....
ဒီကိုရောက်လာတဲ့သူတွေက တက်လိုသိလိုထက် ပညာလိုချင်သူတွေများတယ်လို ထင်တယ်..မသိတာမေး..သိတာပေးယင်းနဲ့ပဲ တိုးတက်ဖို့ လုပ်နေကြတာတွေကြီးပဲလေ...အဟိ..ကျွန်တော်ဆိုယင် ဘာတက်လည်းမေးကြည့် ဘာမှမတက်..ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်းတော့ သိသလိုလို...(ကြွားတာလေ..)တကယ်က ဘာမှမတက်။ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်လိုပဲလေ့လာသင်ယူနေသူပဲဆိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။...:d